88 people killed from road vehicle accidents with in 19 days | World Pulse
Posted December 6, 2019 from Nepal
काठमाडौँ । बढ्दो सवारी साधन सँगसँगै संसारभरि नै अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूमा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दैछ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन ।
सडकको दूरावस्था, सवारी धनी, चालक र यात्रुको लापरबाही तथा सरकारी गैरजिम्मेवारीका कारण सवारी दुर्घटना र त्यससँग सम्बन्धित घटना बढिरहेका छन् । सानो होस् या ठूलो दुर्घटना नभएको दिन नै छैन ।
हाल नेपालमा एकदिनमा ३० देखि ४० वटा सवारी दुर्घटना हुने गर्छ । जसमा दैनिक ७ जनाको मृत्यु हुन्छ भने १० जना घाइते हुने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले बताउँछ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो १८ दिनमा मात्रै सडक दुर्घटनामा १५१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १ हजार ४७५ जना घाइते भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको यो तथ्याङ्क हेर्दा वार्षिक १४ हजारभन्दा बढी सवारी दुर्घटना भइरहेका छन् । वार्षिक सवारी दुर्घटनामा २ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने ४ हजारभन्दा बढी घाइते भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
अझ मृत्यु हुनेमा ३० प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् । देशलाई चाहिने असल नागरिक सवारी दुर्घटनामा परेका छन्, मरेका छन् । भविष्यमा देश हाँक्ने अशल नागरिक अकालमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् ।
मङ्सिर १९ गतेसम्म ८८ जनाको अनाहकमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गएको समाचार रातोपाटीमा छापिएको छ । जसमा कति गते कहाँ के दुर्घटना भयो ? विस्तृत रूपमा तल हेर्न सक्नुहुनेछ ।
मङ्सिर १ गते
काभ्रेपलाञ्चोकको रोसी गाउँपालिका–११ डालाबेँसीस्थित बीपी राजमार्गमा स्कुटर दुर्घटनामा परी एक युवतीको मृत्यु भयो । काठमाडौँबाट सिन्धुलीतर्फ जाँदै गरेको बा९८प ७५८२ नम्बरको स्कुटर खाल्डो छल्ने क्रममा आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा स्कुटरमा सवार एक युवतीको मृत्यु भएको हो । स्कुटीमा सवार अर्का एक जना घाइते भएका थिए ।
मङ्सिर २ गते
यस्तै बाँकेको राप्ती सोनारी गाँउपालिका–१, कुसुममा बस दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते भए । दाङको तुल्सीपुरबाट नेपालगञ्जतर्फ जाँदै गरेको ना५ख ६४४९ नम्बरको बस अनियन्त्रित भई सडकबाट अन्दाजी ५० मिटर तल खसेको थियो ।
बसमा सवार १४ जना घाइते भए । घाइतेमध्ये रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका १३ का ५३ वर्षीय दलबहादुर मल्ल र दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका–६ की ७२ वर्षीया विष्णु कुमारी नेपालीको अवस्था गम्भीर भयो । उनीहरुलाई तत्कालै उपचारका लागि पठाइयो ।
मङ्सिर ४ गते
दोलखाको लामोसाँगु जिरी सडकखण्डअन्तर्गत भीमेश्वर नगरपालिका–८ चरङगेमा बस दुर्घटना हुँदा एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।
सडकमा रोकिराखिएको बा३ख २९९७ नम्बरको बस ब्याक भएर एक्कासी पल्टिँदा वैतेश्वर गाउँपालिका–३, मिर्गेकी ७० वर्षीया कुमारी तामाङको मृत्यु भएको हो । बस मिर्गेबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको थियो ।
राजधानीबाट आवतजावत गर्ने सो सडकखण्ड विस्तारको काम २ वर्षदेखि अलपत्र हुँदा दुर्घटना हुने क्रम बढ्दो छ ।
मङ्सिर ५ गते
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ तेघरीमा जिपकोे ठक्करबाट एक पैदलयात्रीको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा गोदावरी नगरपालिका–२ बस्ने ३४ वर्षीय देवराम टमटा हुन् ।
कञ्चनपुरको झलारीबाट डडेल्धुरातर्फ गइरहेको से१ज ७३९ नम्बरको महिन्द्रा जिपले ठक्कर दिँदा घाइते भएका टमटाको उपचारका क्रममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।
यस्तै सोही दिन बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–३, पुरानो सरजु नदी हुलाकी सडकमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा गुलरिया नगरपालिका–१ का ३५ वर्षीय राजेश यादव थिए । खैरापुरदेखि गुलरियातर्फ गइरहेको भे४प ७२१७ नं को मोटरसाइकल नालामा पल्टिँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका–१ मा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । दुर्घटनामा परी भोटखोला गाउँपालिका–५ का २२ वर्षीय ट्याक्टर चालक मनोज तामाङको मृत्यु भएको हो ।
सदरमुकाम खाँदबारीबाट सामान लिएर मकालुको नुमतर्फ गइरहेको ग१त ४१६४ नं को ट्याक्टर कुवापानीमा अनियन्त्रित भई सडकबाट एक सय मिटर तल खसेको र घटनास्थलमै चालक तामाङको मृत्यु भएको हो ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९, दासढुङ्गामा ट्रककोे ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा नाम, थर र ठेगाना नखुलेका अन्दाजी ४५ वर्षीय पुरुष थिए ।
मुग्लिनबाट हेटौँडातर्फ जाँदै गरेको ना६ख १८९६ नं को ट्रकले ती पुरुषलाई ठक्कर दिएको थियो । ठक्करबाट घाइते उनको उपचारका क्रममा भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । प्रहरीले लगत्तै पुरुषलाई ठक्कर दिने ट्रक र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा लियो ।
यस्तै बाँकेको कोहलपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक युवकको मृत्यु भयो । कोहलपुर नगरपालिका–११ चौराहास्थित सडकमा भे८प ९६७८ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा घाइते भएका अर्जुन खत्रीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
मृतक २६ वर्षीय खत्री कोहलपुरका स्थानीय बासिन्दा हुन् । दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार कोहलपुर नगरपालिका–११ बस्ने १८ वर्षीय निराजन खत्री घाइते भए ।
सोही दिन पृथ्वीराजमार्गस्थित धादिङको गल्छी गाउँपालिका– ६ बैरेनीबजारमा जन्ती बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भयो भने ४० घाइते भए । दुर्घटनामा नुवाकोट जिल्ला बेलकोटगढी नगरपालिका–५ की १४ वर्षीया डोल्मा तामाङको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
नुवाकोटको बाँसगडीबाट अमलेखगञ्जतर्फ जाँदै गरेको बा२ख ६२६८ नम्बरको जन्ती बोकेको बस सडकको खाल्डो छल्न लाग्दा दुर्घटना भएको थियो ।
यस्तै बसुन्धारास्थित इसान बाल तथा महिला अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर प्रभु जोशीको बानेश्वरमा बसले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै मृत्यु भयो । संसद् भवनको दक्षिण गेट अगाडि नम्बर नखुलेको गाडीले ठक्कर दिँदा डाक्टर जोशीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
मङ्सिर ९ गते
काठमाडौँस्थित गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ सुन्दरीजलमा सवारी दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भयो । ड्याम बनाउने क्रममा बा३क ६३८ नम्बरको रोलर सडकबाट तल खस्दा घाइते भएका महोत्तरीका ४५ वर्षीय यर्कमान भुजेलको मृत्यु भएको हो ।
घाइते भुजेलको उपचारका क्रममा नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा निधन भएको हो । मृतक भुजेल लामो समयदेखि रोलर चलाउँदै आएका थिए ।
सुर्खेतबाट नेपालगञ्जतर्फ आउँदै गरेको को१प १०६ नम्बरको मोटरसाइकल बाँकेको चिसापानीमा दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भयो ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ चिसापानीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका–४ का मनिकेश गौतमको मृत्यु भएको हो । चालक गौतमको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । गौतम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जुम्लाका स्थानीय नेतासमेत हुन् ।
सोही दिन गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका–३ ठुलोलुम्पेकको बुटिस गैरामा रिडीबाट ठुलोलुम्पेकतर्फ जाँदै गरेको लु१ज २७८४ नम्बरको जिप दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भयो ।
दुर्घटनामा सत्यवती गाउँपालिका–३, सिङ्दीकी ६८ वर्षीय ललितादेवी सिंजालीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । यस्तै २३ वर्षका साजन राहादी, २२ वर्षका देवबहादुर विक, ७ वर्षका वीरेन्द्र सिंजाली, पाल्पा घर बताउने २३ वर्षका अनिल विक घाइते भए ।
मङ्सिर ११ गते
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कबाट बुटबलतर्फ जाँदै गरेको लु२ख २१४८ नम्वरको यात्रुबाहक बस सन्धिखर्क नगरपालिका–६, कालाखोलामा दुर्घटना हुँदा १९ जनाले ज्यान गुमाए । दुर्घटनामा एक दर्जनभन्दा बढी घाइते भए ।
दुर्घटनामा मृतक १९ जनाको २४ घण्टापछि मात्र सनाखत भयो ।
सोही दिन हुम्लामा टिपर दुर्घटना हुँदा चारजनाले ज्यान गुमाए भने १३ जना घाइते भए । हुम्लाको उत्तरी गाउँपालिका नाम्खाको सल्लीबाट सामान ढुवानी गरिरहेको लु४ख ३२६९ नम्बरको टिपर दुर्घटना भएको हो ।
महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–३, पाटुमा ट्याक्टर पल्टिँदा सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–७ का ३० वर्षीय दिनेश सिंह दनुवारको मृत्यु भयो । सिन्धुलीबाट बर्दिबास बजारतर्फ जाँदै गरेको ना२त ८९३२ नम्बरको ट्याक्टर अनियन्त्रित भई पल्टिँदा चालक दनुवारको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
यस्तै दाङमा बस दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भयो भने २० जना घाइते भए । घोराहीबाट प्युठान जाँदै गरेको ना३ख ६५४२ नम्बरको बस बङ्गलाचुली गाउँपालिका–६ बेचेनीमा दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको हो ।
मङ्सिर १३ गते
सुर्खेतबाट दैलेख जाँदै गरेको भे१ज १०२९ नम्बरको माइक्रोबस दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–४, घोडाबासमा दुर्घटना हुँदा तीनजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । दुर्घटनामा ७ जना घाइते भए ।
मङ्सिर १४ गते
प्युठानको ऐरावती गाउँपालिका–५, पकलामा एम्बुलेन्स दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा एकजनाको ज्यान गयो भने चारजना घाइते भए । ऐरावती–१ बन्जाडे गाउँबाट सुत्केरी छोडेर फर्कने क्रममा धुवाङ स्वास्थ्य चौकीको रा १ च ७६४ नम्बरको एम्बुलेन्स दुर्घटना भएको हो ।
यस्तै सोही दिन सुनसरी, सिरहा, अर्घाखाँची, चितवन, उदयपुर र पाँचथरका विभिन्न स्थानमा भएका छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा परी ११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
मङ्सिर १५ गते
काठमाडौँ, भक्तपुर, चितवन, बारा र रुपन्देहीका विभिन्न स्थानमा भएका छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा परी ७ जनाले ज्यान गुमाए । काठमाडौँ महानगरपालिका–१४, कलङ्की मकालु पम्प नजिक नम्बर नखुलेको टिपरको ठक्करबाट नाम, थर, वतन नखुलेका अन्दाजी ४० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो ।
यस्तै भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका–१ सिर्जनानगरस्थित सडकमा बा३ख २५३१ नम्बरको टिपरको ठक्करबाट पैदलयात्री उदयपुर हडिया–५ घर भएका २७ वर्षीय समिर विकको मृत्यु भएको थियो ।
यसैगरी चितवनको खैरहनी नगरपालिका–१० बडागाउँस्थित भित्री सडकमा ना.५८ प ९४१ नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट घाइते भएका साइकलयात्री ५५ वर्षीय मदरा चौधरीको मृत्यु भयो ।
मङ्सिर १६ गते
गुल्मीबाट कुल पूजाका लागि बागलुङको देवीस्थान जाँदै गरेको जिप दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु भयो । गुल्मीको दोहलीबाट बागलुङको देवीस्थानका लागि छुटेको जिप तुरतुरेताल अगाडि दुर्घटना भएको हो ।
गुल्मीको तम्घासबाट बागलुङका लागि कार्की परिवारलाई बोकेर आएको ग१ज ५२१९ नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा १४ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने एकजना बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता व्यक्तिको मङ्सिर १७ गते मात्र शव भेटिएको थियो ।
जिप सडकबाट ३ सय मिटर तल बडिगाड खोलामा खसेको थियो । यस्तै दुर्घटनामा ३ जना घाइते भएका थिए । उनीहरुलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ ।
मङ्सिर १७ गते
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाअन्तर्गत लक्ष्मीनियामा पिकअप भ्यान दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भयो भने १४ जना घाइते भए । गढीमाई मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कंदै गरेको ना ५च १२२७ नम्बरको यात्रुबाहक पिकअप अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खस्दा दुर्घटना भएको हो ।
गढीमाईबाट धनुषा आउँदै गर्दा विपरीत दिशाबाट गइरहेको ट्रकले हेडलाइट डिम नगर्दा अनियन्त्रित भई पिकअप भ्यान सडकबाट तल खसेको घाइतेहरुको भनाइ छ ।
मङ्सिर १९ गते
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–५, चौबीस माइलमा भएको जिप दुर्घटनामा २ जनाले ज्यान गुमाए । बुटवलबाट पाल्पातर्फ आउँदै गरेको लु१ज ४२०९ नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा जिप चालक रैनादेवी गाउँपालिका–५, छहराका २५ वर्षीय दिलिप बम्रेल र सहचालक २४ वर्षीय कृष्ण कार्कीको ज्यान गएको हो ।
यसैगरी नवलपरासी (पूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ पाङरेस्थित सडकमा ना.२८ प २२६० नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भयो । दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार सोही ठाउँ बस्ने ५५ वर्षीय बुद्धबहादुर श्रेष्ठको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
यता सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका–११ गम्हरियास्थित सडकमा पनि ना४३प ५६९१ नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा पैदलयात्री गणेसिया बस्ने ६० वर्षीय धरीक्षण रामको मृत्यु भएको छ ।
पहाडी भेगमा दुर्घटना बढ्दो
पछिल्लो समय पहाडी भेगमा सवारी दुर्घटना बढ्दो छ । एक हप्ताअघि भएको अर्घाखाँची दुर्घटना र बागलुङ दुर्घटनामा मात्रै ३ दर्जनभन्दा बढीले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
सडकको अवस्था र तीव्र गतिका कारण पहाडी इलाकामा अत्यधिक दुर्घटना हुने गरेका प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘चालकको लापरबाहीको कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको छ ।’
सहर केन्द्रित ट्राफिक प्रहरी
सडक व्यवस्थापनमा खटिँदै आएको ट्राफिक प्रहरी सहरमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । समयमै पहाडको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने हो भने निकट भविष्यमा यस्ता दुर्घटना नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन ।
पहाडी भेगमा सोचेअनुसार ट्राफिक प्रहरी राख्न नसकेको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख भीम ढकाल स्वीकार्छन् । ‘चालकले ट्राफिक नियमको पालना गरे निकै हदसम्म दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा शङ्का छैन,’ ढकालको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार मङ्सिर १५ गतेसम्मको डाटा (मृत्युमा)
प्रदेश १ मा १६ जना
प्रदेश २ मा ३१ जना
प्रदेश ३ मा १६ जना
प्रदेश ४ मा २२ जना
प्रदेश ५ मा ३० जना
प्रदेश ६ मा ४ जना
प्रदेश ७ मा ८ जना
उपत्यकामा १० जना
Thank you for sharing this horrifying news. I hope there are mitigating measures to prevent these accidents.
Wow! That'salot of accidents. What's causing all of them? Is anything being done to address the issue?
road is in mountain area very rough road
Oh, I see. Are they doing anything about it, though?
Thank you for sharing. We pray some measures are put in place to prevent more accidents.